Ny andian-penguins tany Seno Otway, Colonie Penguin tao Seno Otway - Punta Arenas
Amerika Atsimo Shily Punta Arenas
Ny andian-penguins ao amin'ny Hay Hay
Adiresy: Mitazà ny Seno Otway, Punta Arenas, Chile;
Isan'ny penguins: mihoatra ny 10.000.
Punta Arenas no tanàna farany atsimo amin'ny tany, avy any Chili renivohitra dia esorina amin'ny 3,090 kilometatra, azo antsoina koa hoe renivohitr'i Patagonia . Ny tanàna dia toy ny toerana fanombohana ho an'ny lalana fizahantany maro.
Any akaikin'ny tanànan'i Punta Arenas any atsimon'i Chili, eo amoron-dranomasina amoron-dranomasina eo anelanelan'ny Nosy Riesco sy ny nosin'i Brunswick, dia ny tahirim-bolan'ny Seno Otway. Mahaliana ny zava-misy fa manomboka ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa eto ho an'ny fanangonana sy ny fisintonana ireo nestlings Magellan penguins nivory.
Ny zanatany penguin any Seno Otway dia iray amin'ireo zanatany roa lehibe an'ny penguin ao amin'ny faritr'i Punta Arenas. Ny isany dia mihoatra ny 10 000. Mivily eto ry zareo avy any Arzantina ary ny ampahany afovoan'i Chili mba hialokaloka sy hamboly. Ankafizin'izy ireo ny fahavaratra atsinanana. Ny koloniana dia manana toerana malalaka. Ny ampahany amin'izany dia misokatra ho an'ny mpizaha tany. Afaka mijery ny fiainan'ireo vorona ireo ianao ary hiresaka amin'izy ireo mihitsy aza. Tsy matahotra olona ny penguins. Ireo mpizahatany koa dia afaka manara-maso ny fomba fiainany ao anaty lavaka, ny fomba itodihan'izy ireo eny an-dalana, ny fomba hanomezana sakafo ny zanak'ombilahy. Ny sarintany dia mitentina 12 000 pesos Shilia, izay manodidina ny 17 euros.
Mahaliana tokoa ny mijery ny penguins, noho ny fomba fifandraisany amin'ny ankizy. Ny ray aman-dreny dia mizara ny andraikiny amin'ny fanabeazana. Isan'andro 10 ka hatramin'ny 5 ora hariva izy ireo dia mifandimby mandinika, miara-mifampijery. Ny iray mipetraka miaraka amin'ny ankizy, ny iray hafa dia trondro. Ny mpizaha tany dia mahita fahafinaretana amin'ny fomba fisintonan'ny penguins akaikin'ny moron-dranomasina ary manindrona ny toerana, fa tsy sahy miditra ao anaty rano. Miandry izay ho voalohany, indraindray hatramin'ny antsasak'adiny. Saingy mendrika ny hitsambikina ao anaty rano, tahaka ny ataon'ny hafa manaraka azy. Ny penguins amin'ny tany sy ny rano dia mitazona andiany. Ny lahy dia tonga eo amin'ny zanatany alohan'ny vavy ary manamboatra akany. Ny vavy dia mametraka atody iray, fa mamela sy mamafy ny lahy ao anaty vala eo ambanin'ny kibo. Raha mijery tsara ianao, dia efa ao anaty fihinanam-bilona ireo zana-tohatra kely kely. Maro ny akanim-borona manakaiky ny vondrona mikarokaroka ny ankizy, ary mifampiresaka.
Misy karazana penguins maromaro: Imperial, Royal, Papuan, Arctic, Magellanic ary ny hafa. Ao amin'ny tahirin'ny Seine Otva no mamelatra ny fomba fijery Magellanic. Rehefa miseho izy ireo, dia izy ireo dia miavaka amin'ny andian-tsoavaly roa mifampizara ny tratra fotsy.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny tahiry?
Ny mpizahatany tonga avy any Punta Arenas dia anisan'ny fitsangatsanganana na fandefasana jiro. Any Punta Arenas dia azonao atao amin'ny fiaramanidina avy ao Santiago na amin'ny fiaramanidin'ny fitsangantsanganana. Tsara homarihina fa ny volana tsara indrindra hotsidihina dia ny Desambra, Janoary ary Febroary.
Cuenca - toetrandro
Trehlyazh miaraka amin'ny varavarana fitaratra mirongo telo
Tavoahangy miaraka amin'ny laisoa sy holatra
Atonta bronchiale atopika
Eto ambany ny sobika: napetrak'i Gwen Stefani ny sarin'ny malalany ...
Mirehitra ny molotra - famantarana
Akanjo volom-borona mena
Ahoana ny fanesorana ny valala nasolabial?
Nanapa-kevitra i Chris Jenner sy Cory Gamble tamin'ny datin'ny fampakaram-bady
Kely avy amin'ny cough - recipe
Ny fampandrosoana ny tena sy ny fanatsarana ny tena
Ahoana no fomba anaovana pòm?
Ny lokon'ny loko mavo
Diastase amin'ny rectus ny hozatry ny hozatra
Collection Gucci - Spring-Summer 2015
Janet Jackson dia mandany ny vakansy Krismasy miaraka amin'ny lehilahy tsy fantatra
Ny hetsika dia saziana